M/weynaha Somalia oo casho sharaf u sameeyey guddigii qaban-qaabada munaasabadihii… – Hagaag.com
M/weynaha Somalia oo casho sharaf u sameeyey guddigii qaban-qaabada munaasabadihii…
Posted on 4 Luulyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu xarunta madaxtooyada ugu sameeyay casho sharaf guddigii qaban-qaabada munaasabadihii 26ka Juunyo iyo 1-da Luuliyo.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay jiraan shakhsiyaad Soomaaliyeed oo naftooda u huray sidii ay u ilaalin lahaayeen taariikhda umadda Soomaaliyeed kuwaas oo mudan in mar walba la xuso si jiilka dambe ay u helaan dad ay kaga daydaan waddaniyadda iyo dal jacaylka.
“Saddexdan sarkaal waxaa ay qabteen in ay xafidaan taariikhda Soomaaliya oo ay ilaaliyaan sharafka iyo qarannimada Soomaaliyeed, xitaa in ay naftooda u huraan. waa mahad-sanyihiin, mana idin ilaawi doonno, qarankuna waa idiin abaal gudi doonaa” ayuu yiri Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Cashadan mahadnaqa ah ee uu Madaxweynuhu u sameeyay Guddigii Qaban-qaabada maalmaha xorriyadda waxaa kasoo qeybgalay Ra’iisul Wasaaraha, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, xubnaha Guddiga Qabanqaabada, Saraakiil ka tirsan Ciidamada Qalabka sida, Hobollada Waaberi iyo Horseed iyo marti sharaf kale.